वडाध्यक्ष २१ हजार घुससहित पक्राउ - Dna Nepal
वडाध्यक्ष २१ हजार घुससहित पक्राउ
३ मंसिर २०७६, मंगलवार १२:४९
मोरङ, मंसिर ३ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङ जिल्ला जहदा गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष उमेशकुमार साहलाई सेवाग्राहीसँग २१ हजार रुपैयाँ घुस लिदालिदै पक्राउ गरेको छ । अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
वडाध्यक्ष साहले वडा नं. १ स्थित, हरिलाल सर्व्रियाको घरदेखि बाँधसम्मको ग्राभेल सडक निर्माण योजनाको सम्झौता गरी कार्यान्वयन लगायतका कार्यमा सहजिकरण गरी दिने प्रयोजनका लागि घुस रकम मागेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यसैक्रममा मंगलबार अख्तियारले उनलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो ।